China 50MM / 55MM / 63MM Herb Grinder4Piece Zinc Alloy Spice Crusher ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ | ကျောက်တုံး
Veg / ပန်းဖော်မြူလာ
linear Bar အလင်း
အထူးသဖြင့်ခြောက်သွေ့သောအပင်မျိုးစေ့ကြိတ်စက်၊ ကြိတ်ခွဲစက်များ - သင်၏ခြောက်သွေ့သောအရွက် / စပ်များအားလုံးကြိတ်ရန်အတွက်ပလက်တီနမ်ကြိတ်ခွဲစက်များကြိတ်စက်။ လေးလံသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်းကြောင့်လေဖြတ်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ သံလိုက်အပိုင်းအစကြိတ်စက်နှင့်သတ္တု ၃ ခန်းမှကြိတ်ခွဲစက်သည်သင်၏အပင်၏ဖြန်းခြင်းကိုမဆုံးရှုံးနိုင်အောင်သေချာစေသည်။
ပစ္စည်းအမှတ် .: GSRP2584
ထပ်: ၄ ပိုင်း
အရောင်: မီးခိုးရောင်၊ အနက်ရောင်၊ အစိမ်း၊ အပြာ၊ အနီရောင်၊ ငွေရောင်၊
အရွယ်အစား (အချင်း x အမြင့်): ၂ x ၁.၅၇ လက်မ (၅၀ x ၄၀ မီလီမီတာ)
၂.၂ x ၁.၅၇ လက်မ (၅၅ x ၄၀ မီလီမီတာ)
•အထူးသဖြင့်ခြောက်သွေ့သောအပင်မျိုးစေ့ကြိတ်စက်၊ ကြိတ်ခွဲစက်များ - သင်၏ခြောက်သွေ့သောအရွက် / စပ်များအားလုံးကြိတ်ရန်အတွက်ပလက်တီနမ်ကြိတ်ခွဲစက်များကြိတ်စက်။ လေးလံသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်းကြောင့်လေဖြတ်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ သံလိုက်အပိုင်းအစကြိတ်စက်နှင့်သတ္တု ၃ ခန်းမှကြိတ်ခွဲစက်သည်သင်၏အပင်၏ဖြန်းခြင်းကိုမဆုံးရှုံးနိုင်အောင်သေချာစေသည်။
• RAZOR-SHARP METAL TEETH, လျင်မြန်စွာကြိတ်ပါ - အစိုင်အခဲနှင့်တာရှည်ခံသောဇင့်သတ္တုစပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပလက်တီနမ်ကြိတ်ခွဲစက်။ အရွက်ကြိတ်စက် Sharp Teeth သည်သင့်အားချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်စေပြီးထိရောက်သောကြိတ်ခွဲမှုကိုသေချာစေသည်။ သွေ့ခြောက်သောအပင် grinder ။
• အရည်အသွေးမြင့် MESH SCREEN FILTERS, ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းအားရရှိမှု - ဤပလက်တီနမ်ကြိတ်စက်များသည်ပန်း ၀ င်မှုန်ကူးစက်ဖြင့်ခြောက်သွေ့သောအပင်ခြောက်သွေ့သောကြိတ်ခွဲစက်များကိုအားကောင်းသောအရည်အသွေးနှင့်အကြမ်းခံမှုကိုအာမခံသောခိုင်ခံ့ပြီးအရည်အသွေးမြင့်သောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
• ULTRA STRONG LID MAGNET နည်းပါးသောစွန့်ပစ်ပစ္စည်း - ဤကြိတ်စက်၏ထိပ်ရှိသံလိုက်သည်ခိုင်ခံ့သည်။ သံလိုက်အဖုံးသည်ယိုဖိတ်မှုကိုလျှော့ချရန်များစွာအထောက်အကူပြုသည်။ အခြားအရွက်ကြိတ်ခွဲစက်နှင့်မတူဘဲအဖုံးသည်လည်ပတ်နေစဉ်အလွယ်တကူကျနိုင်သည်။ ခိုင်ခံ့သောသံလိုက်များရှိဤခြောက်သွေ့သောပျိုးပင်ကြိတ်စက်သည်အဖုံးကိုခိုင်မြဲစွာကိုင်ထားသည်။ ဤကြိတ်ခွဲစက်သည်လှည့်ဖျားရန်လွယ်ကူပြီးအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်သတ္တုသံကိုဖြစ်စေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
• ပြီးပြည့်စုံသောအရွယ်အစား၊ အလွန်သယ်ဆောင်ရလွယ်သောဖြတ်ခရီးသွားကြိတ်ခွဲစက် - သတ္တုပလက်တီနမ်ကြိတ်ခွဲစက်သည်သင်၏အိတ်ကပ်ထဲ၌ ၀ င်ရောက်သည်။ ပန်း ၀ တ်မှုန်ကူးစက်၊ အလွန်အဆင်ပြေသော၊ မိန်းကလေးများအတွက်ကြီးကျယ်သောကြိတ်ခွဲစက်။ ဤပစ္စည်းကို ၀ ယ်ပြီးမှနောင်တရလိမ့်မည်ဟုသင်ထင်လျှင်၎င်းသည်သင်ဝယ်ယူနိုင်သောအကောင်းဆုံးကြိတ်ခွဲစက်ဖြစ်သောကြောင့်မစိုးရိမ်ပါနှင့်။
• အသုံးပြုရန်နှင့်သန့်ရှင်းရန်လွယ်ကူသော - ဤကြိတ်ခွဲသောအရွက်ကြိတ်ခွဲစက်သည်အလွန်လွယ်ကူသောကြောင့်သင်၏အချိန်ကိုသက်သာစေသည်။ အကြိမ်စုံတွဲများအတွက်ထိပ်နှင့်နောက်ကျောထိပ်ကိုလှည့်ပါ။ ထို့အပြင်ကြိတ်ခွဲစက်များကိုသန့်ရှင်းအောင်ထားရန်အလွန်လွယ်ကူသည်၊ ဆပ်ပြာနှင့်ရေကိုသာသုံးပါ။ ခြစ်ရာမှဝတ်မှုန်အမှုန်များကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။
63MM / 2.5″ အနက်ရောင်အပိုင်းအစ Spice Grinder ဇင့် ...
63MM / 2.5″ White4Piece အမွှေးနံ့သာဇင့် ...
63MM / 2.5inch သက်တန့်သွပ်အလွိုင်းအမွှေးအကြိုင်များ ...
63MM / 2.5 လက်မ Herb Grinder သက်တန့်အရောင် ၄ ခု ...
60MM / 2.4 လက်မ Magnetic Grinder Hexagon4အပိုင်း ...
63MM / 2.5 လက်မ Herb ကြိတ်စက်4Piece Zinc Alloy ...
Address: ၁၈၁၆ Bldg G, Hualian city panorama, Dist 27, Dalang Bao'an dist, Shenzhen, China
1816 Bldg, G, Hualian city panorama, Dist 27, Dalang Bao'an dist, Shenzhen, China
© HEMGRINDER 2020 အခွင့်အရေးအားလုံးကိုကာကွယ်ထားသည်။